Qaybta 1aad: Weligaa inta aad wajahay wax dhibaato ah soo dhoweynta marka la isticmaalayo aad iPhone?
Waxaa dhici karta in ay dhib la soo dhaweynta signal marka aad isticmaasho iPhone iyo hesho farriimo soo bandhigay sida "Service Maya", "Raadinta Service", "No SIM", "Insert SIM Card". Sidoo kale, waxaa laga yaabaa inuu arrimaha la signal WiFi ama shabakadaha internet indhotiri xitaa aad ogtahay oo waad qaadan qalabka kale. Arrimaha soo dhaweynta ayaa waxaa sababi kara qalab iPhone ama bixiyaha adeegga. Haddii ay tahay a brand iPhone cusub, waa inaad tagtaa dukaanka meesha aad iibsaday iyo in wax laga beddelo. Haa, waan ogahay waa raaxo, maxaa yeelay, aad rabto in aad si deg deg ah ku raaxaysan aad iPhone. Laakiin, ii kalsoon tahay, in aad ka fogaato arrimaha soo socda. Kiis kale oo ay noqon kartaa in aad leedahay calaamad u meel kasta oo kale, laakiin aan gurigaaga. Xaaladdan oo kale waa inaad la xiriirtaa adeeg bixiyaha aad. In ka badan tahay, haddii ay taasi ku jiri lahaa dhibaatooyin ee ka iPhone.
Xitaa haddii waxaa lagu talinayaa in la gaarsiiyo aad iPhone la macruufka dambeeyay ku haboon, kac laga yaabaa in ay dhibaato soo dhaweynta. Ka hor si ay u hagaajinta kasta, marka hore waa in aad xogta oo dhan gurmad ka iPhone. Just in loo diyaar garoobo, haddii arrimaha wax ka dhacaan.
Arrimaha anteeno soo bixi kara haddii iPhone la qabsadey hab ay ku yaallaan labada dhinac ee band bir ka geeska hoose ee bidixda. Waxaa ku xiran tahay meeshii anteenada waa in qalabka. Mid ka mid ah fikrad waa in ay soo iibsato kiiska dibadda si looga fogaado noocan oo kale ah arrimaha. In times our, waxaa jira xaalado badan oo fiican-raadinaya dibadda, haddaba sida runta ah waxaad ka heli kartaa kiiska cabsi aad iPhone.
Qeybta 2: U dayactir soo dhaweynta dhibaato naftaada by iPhone
Halkan waxaad ka heli kartaa fikrado dhowr ah si ay u xalliyaan arrimaha soo dhaweynta keligaa, ka hor si ay u tagaan ee bixiyaha adeegga.
1. Waxaad dib karaan goobaha shabakada ka iPhone, oo ag maraya in Settings> General> celi dooro celi Settings Network. Tallaabadan waxaa laga yaabaa isbedelka habboon iyo xallin karo arrimaha shabakada.
2. Ka hadalka ku saabsan resetting kaliya ee qaar ka mid ah muuqaalada, waxa kale oo aad dib kartaa xogta oo dhan. Waa in aad ka raadin Settings ku saabsan iPhone, iyo dooran Guud, ka dibna u celi iyo tallaabada ugu dambeysa waa in ay doortaan celi Settings. Tallaabadan ma tirtiri doonaa xogta aad. Laakiin haddii aad dareento raaxo badan, waxaad samayn kartaa gurmad ah ee aad iPhone ka hor in ay dhex maraan goobaha.
3. Soo Celinta aad iPhone sida iPhone cusub waa fursad kale, laakiin waa in aad badbaadin xogta oo dhan ka iPhone hor dhigi ficilkan daran ah. Inta lagu guda jiro isticmaalaya iPhone, aad soo uruurisay ka badan oo data. Dabcan, aad rabto inaad sii Xog xataa haddii mararka qaar dhib ah loo baahan yahay iyo qalab aad waa in dib loo soo celiyo.
4. Ilaali iPhone kiiska dibadda, gaar ahaan haddii aad ka hor dhibaatooyinkii la soo dhaweynta ah ee afka baarkiisa ah iyo bartey aad la xaliyey arrintan. Si looga fogaado dhibaatooyinka soo socda, oo la xiriira soo dhoweynta keena anteeno ka mid ah qalab aad, aad iPhone kiiska dibadda.
Sida loo sii qulquli Video ka iPhone / iPad / iPod in TV Apple
> Resource > iPhone > Sida loo dayactir Dhibaatooyinka Reception iPhone